B.E.H.S (5) Botataung: ကျောင်းသတင်း
7 Responses to "ကျောင်းသတင်း"
Wa Ha Ha responded on 9:25 PM #
No need to sad or miss the old building.Better move to new place with spaces for students to play or have activities.Old one likeacage/prison.May be only u miss that old one. U stupid. Old one,lighting & ventilation too bad. Dengue outbreak everyyear. Why dun u let ur kids go to attend cage/prison school? & let ur kids suffer fr Dengue. U shit & stupid.
pansy responded on 9:33 PM #
ghostbell responded on 10:53 AM #
ဘာဘဲပြောပြော ကျောင်းကဘယ်လို စုတ်စုတ်လေ၊ ကိုယ်တို. ပညာသင်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းပါဘဲ။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်ကျောင်းကိုချစ်တယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လို. ကျောင်းရှေ.ကိုရောက်ရင်၊ ကျောင်းရဲ့ နေရာဟောင်းမှာ လူနေအဆောက်အဦးကို အစားထိုးပြီးမမြင်ချင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ကျဉ်းကျဉ်း၊ ကိုယ်တို. ကျောင်းသားဦးရေ ထောင်ပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တာဘဲ။ ဘယ်လောက်စုတ်စုတ် ဗိုလ်တထောင်(၅)ဆိုတဲ့ ကျောင်းရဲ့ နာမည်တစ်ခုဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးလောကမှာ မှတ်တိုင်ထူနိုင်ခဲ့တာဘဲလေ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မလုပ်ရပေမယ့်လဲ၊ ပျော်၇ွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာ စာသင်ခဲ့ရပါတယ်။ Wa Ha Ha အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းကို ချစ်တဲ့ ဓာတ်ခံမရှိလို. ဒီလိုစကားမျိုးပြောထွက်တာလို.ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တို.မွေးတဲ့ သားသမီးတွေကို အဲလို ကျောင်းမျိုးမှာထားချင်လို.လားဆိုတာကတော့၊ မင်းမိဘတွေ ဘာလို.ဗိုလ်တထောင်(၅)မှာ ထားခဲ့လဲလို. အရင်ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ။
Sorry... ကိုယ်ရန်လာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းကို မကောင်းဘူးလို.ပြောတာ မခံချင်လို.ပါ။
phyo paing responded on 2:21 PM #
Awesome comment Ghostbell... I just googled B.E.H.S 5. Botahtaung and happened to see this blog. I was from 2006-07 batch and yeah like Ghostbell said I always am glad to see our old small school everytime I return yangon. Perhaps,areplace of our school building will sadden all of us passionate students.
FUCK OFF WA HAHA...
Genelyn responded on 9:42 PM #
phung bella responded on 3:36 AM #
epasalon responded on 6:59 AM #